Virus Outbreak Exposes Perils of Exotic Wildlife Trade
Myanmar’s Live Swine Imports Top 112,000 Animals
Ongo, MOB Partner to Offer Digital Services
Leading B2B digital payment service provider Ongo and Myanmar Oriental Bank (MOB) on January 13 announced their latest partnership to enable customers to easily access their bank accounts via Ongo’s mobile app. Using the integrated services, customers will be able to conveniently and freely move money into their MOB savings accounts, earning an interest, as well as move money into Ongo’s mobile wallet for transactions, according...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Ministry of Labour, Immigration, and Population said that it has provided K30 million social security fund assistance to workers whose jobs are temporarily suspended as around 200 factories are halted to examine if they meet the safety requirements to prevent the spread of the COVID-19. The social...
ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် MPT Money သည် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် မြန်ဆန်၊ လွယ်ကူ စိတ်ချရသော ငွေသားကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့မလိုသည့် “ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု”’ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှု အခြေအနေကြောင့် မိမိတို့နေအိမ်မှပင် ငွေပေးချေမှုများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနှင့် လုံခြုံစွာ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှု” ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၈၀ ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ပေါင်း ၂၇,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် Mobile Wallet ဝန်ဆောင်မှု၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခြင်းနှင့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်များ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊စျေးဝယ်ရာ၌ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း၊ မိမိအကောင့်ထဲမှ ငွေသားကို MPT Money...
(English text below) COVID-19 ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့ရေနံစျေးနူန်း အကျပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း PTTEP မြန်မာ့စီမံကိန်းသည် ၂၀၂၀ စီးပွားရေး စီမံကိန်းအတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားမည် လတ်တလော ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိနေသော COVID-19 ၏ ရိုက်ခက်မူများကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံစျေးကွက်မှာ အကျပ်အတည်းဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း PTTEP မြန်မာ့စီမံကိန်းသည် ကြိုတင်လျာထားချက်များအတိုင်း ၂၀၂၀ စီးပွားရေး စီမံကိန်း ကို ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကုမ္မဏီ အနေဖြင့် အနာဂါတ်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မူများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ “ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကြောင့် မတ်လထဲကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရေနံစျေးနူန်း ကျဆင်းမူ ၆၀ ရာခိုင်နူန်းခန့်ဟာ ယခုနှစ်အတွက် လျာထားတဲ့ PTTEP...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Ministry of Labour, Immigration and Population said that public and private sectors created 18,352 jobs across the country in June this year. The ministry said it has been helping people to find jobs through the Labour Exchange Management System aiming to help businesses find enough workforce. The government...